12-ka April waa xasuus qaran oo ku weyn dadka & dalka (warbixin) – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
12-ka April waa xasuus qaran oo ku weyn dadka & dalka (warbixin)
By kullane / April 12, 2020 May 12, 2020
Umad kasta oo kamid ah bulshada ku dhaqan dunida waxay si gaar ah u leeyihiin munaasabado iyo xaflado qiimo gal ah oo lagu soo bandhigo taariikhda dhaxalka ah ee ay ka tageen dadka wadaniyiinta ah iyo kuwa kale ee u soo halgamay midnimada iyo difaaca qaran kasta oo ka jira Caalamka.
Sanadkii 1960-kii ayeey aheyd markii la unkay dhismaha ciidamada xoogga dalka oo ah cududda koowaad ee laf-dhabarka u ah bulshada,waxaana xilligaan loo arkaa in ay yihiin kuwo lagu qanci karo qaabka ay u socdaan howlahooda iyo dadaalada kale ee ay kaga qeybgalayan horumarka dalka.
waa dhab ah in dhismaha ciidamada xoogga uu ahaa mid ku yimid dadaal miro-dhal ah ay wada lahaayeen bulshada iyo qaar ka mid ah dalalka daneeya arimaha Soomaaliya,sida Maasar,Ruushka,Talyaaniga,Ciraaq iyo kuwo kale,kuwaas oo ka qeybgalay diyaarinta iyo qalabeynta ciidamo abaabulan oo wax ka qaban kara guud ahaan ammaanka Qaaradda Afrka,kan gobolka iyo gudaha dalka Soomaaliya.
Waxaa markhaati ma doonto ah sanadihii u dhexeeyey 1964- 1977-dii in Ciidamada xoogga dalka ay ahaayeen kuwo soo hooyay guullo taariikhi ah ka dib markii ay baadigoob u galeen soo celinta dhulalkii ka maqnaa dadka Soomaaliyeed,iyagoo kaashanaya dowladda iyo shacanka oo u howlgalay diyaarinta ciidamo xoogam oo leh tiro iyo tayo,isla markaana lagu aamini karo dadka iyo dalka.
Dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyay waxaa lagu guuleystay in dib loo uruuriyo ciidamada, isla markaana la howlgaliyo qeybihii iyo talisyadii uu ka koobnaa ,iyadoo lagu kordhiyay dhallinyaro cusub oo dhiirri geliyay soo celinta amniga iyo kala dambeynta,ka dib kolkii dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka ay saameyn kooban ku yeesheen ciidamada.
Inkastoo xuska sanadguurada 60-aad ay ku soo beegantay xilli dalka ay ka jiraan la tacaalidda cudurada Cronavirus ee loogu magac daray covid 19,haddana waxqabadka ciidanka iyo xasuusta gaarka ah ee ay leeyihiin waa mid ku weyn qalbiyada dadka ,kuna qoran baalasha dahabiga ah ee taariikhda Soomaaliya.
Haddaba,iyadoo laga duulayo hakadka galay soo bandhigidda munaasabadda xuska 12-ka April ee sanadguurada 60-aad aawadeed,Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Farmaajo iyo madaxda Gaashaandhigga waxay dhambaallo hambalyo ah hawada u mariyeen dhammaan saraakiisha,saraakiil xigeenada,alifleyda iyo dableyda iyo guud ahaan xaasaska ciidamada xoogga dalka meel kasta oo ay ka joogaan dalka.
Madaxdu,waxa ay ku ammaaneen ciidamada dadaalka ay ugu jiraan soo celinta amniga iyo doorka ay ka qaateen horumarka bulshada iyagoo ballanqaaday in loo howlgalayo sidii loo tayeyn lahaa ciidamada isla markaana loogu heli lahaa agab ama qalab militery oo ay ku hawlgalaan iyo tababarro sare loogu qaadayo xirfaddoda shaqo si mustaqbalka dhow ay u hantaan ammaanka guud ee dalka.
Ciidamada Xoogga gabagabadii waxaa loogu baaqay in ay laba jibaaraan howlaha gurmadka ah ee ay u hayaan umadda,gaar ahaan soo celinta nabadgelyada dalka,iyadoo loo rajeeyay ciidamada in sanadkaan kiisa kale ay ku gaaraan horumar iyo barwaaqo.
Weey muuqataa in ay soo hagaageyso xaaladda dalka,sidaa daraadeed haddii la qaato tallooyinka iyo waajibaadyada shaqo ee la siiyo ama horyaalla ciidamada waxaa suurtagal ah in la helo xaalad nabadgelyo oo bulshada u horseeda horumar taam ah oo dhinacyo badan.